बलिउड चर्चित नायक सुनील सेट्टीले रुख समातेको तस्बिरले फेरेको हो उनको जिन्दगी ? जान्नुहोस् यो रहस्य « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
बलिउड चर्चित नायक सुनील सेट्टीले रुख समातेको तस्बिरले फेरेको हो उनको जिन्दगी ? जान्नुहोस् यो रहस्य
सुनील सेट्टीकी छोरी आथियाले पनि बलिउडमा डेब्यु गरिसकेकी छिन् । सुनीलले फिल्ममा डेब्यु गर्दा उनको सुगठित शरीरको निकै चर्चा भएको थियो । उनी ९० को दशकमा छाएका अभिनेता हुन् । उनी एक्सन स्टार थिए । उनले ‘बलवान’, ‘वक्त हमारा है’, ‘सपुत’जस्ता सफल एक्सन फिल्ममा काम गरेका थिए ।
सुनील सेट्टीलाई पहिलो फिल्म उनको ‘बडी’का कारण मिलेको बताइन्छ । उनले एउटा फोटोसुट गराएका थिए, जहाँ सुनीलले रुखलाई समातेर फोटो खिचाएका छन् । सुनील फिल्मका लागि जहाँ अडिसनमा जाँदा पनि बायोडाटामा यही तस्बिर राख्थे । फोटो हेरेरै उनलाई पहिलो फिल्म बलवानमा मौका दिइएको बताइन्छ । उनको साथमा अभिनेत्री दिव्या भारती थिइन् ।
‘बलवान’मा सुनीलले आफ्नो बडी पनि देखाएका थिए । उनको दोस्रो फिल्म ‘वक्त हमारा है’ थियो । १९९३ मा आएको सो फिल्मलाई साजिद नादियावालाले बनाएका थिए । सुनीलले लगभग एक सय १० फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । अचेल सुनील ठूलो पर्दामा कम देखिन्छन् ।